Team Tourism | Hongli
Kambani yedu inobhadhara kwete chete kuedza kwevashandi asiwo kwevashandi vemuviri uye hwepfungwa. Semuenzaniso, kambani yedu inoronga zvemitambo kusangana kurega vashandi vachirovedza muviri. Mwaka wadarika, vese vashandi vanotora chikamu chemitambo kusangana. Munguva yemusangano wekusangana, takaisa zviitiko zvinoverengeka zvemitambo. Kunze kwe4 * 50 relay mujaho, kunewo matangi ehondo, 100m inomhanya nhangemutange uye ruzivo runyorwa rwemitambo.
Kunze kwemitambo kusangana, kambani yedu inogadzirisawo timu yekushanya. Mwaka wadarika, takaenda kuZHOUSHAN pamwechete. Muboka redu, maive nevashandi makumi maviri neshanu vanotora nzvimbo iyi. Kutanga, takatora bhazi raienda zhoushan. Zvakatora maawa mana kuti ndisvike. Dzave kuma 1 dzemangwanani, takatora kudya kwemasikati. Mushure mekudya kwemasikati, takatanga kukwira gomo uye kushanyira nzvimbo. Mushure memaawa maviri, takasvika pamusoro pegomo. Uyezve, takatora mafoto. Kuzorora inenge hafu yeawa, isu takadzokera.
Zvadaro, takaenda kunzvimbo inoyevedza yeWu Shi Tang. Munzvimbo iyi, takaona dzakawanda dema uye dzakajeka cobblestones. Uye isu takatorawo chikepe kushanyira nyanza.
Husiku, taive nenguva yekuita mabasa emahara. Takaenda kumakungwa tikatamba mitambo. Nekudaro, vanhu vakati wandei vakasarudza kushanyira husiku husiku musika. Kana vari vashandi vaienda kumhenderekedzo yegungwa, vakatamba jecha uye vakamboedza kubata crab.
Zuva rakatevera, takaenda kuPutuo gomo. Tinoshanyira ibwe rinomiririra seiro ibwe semoyo. Chinonyanya kukosha itembere uye bamboo grove.
Mushure mekushanya, takadzokera ku Hang Hang. Rwendo rwakakura sei.
Nguva yekutumira: Jun-18-2020